Study in Ukraine - Xarunta Admission Yukreeniyaan rasmiga ah. No Imtixaanada
Study Engineering ee
Waa doorashada saxda ah ee mustaqbalka
AKHRI WAX DHEERAAD AH hadda Codso
Ma rabtaa in aad dhakhtar la aqoonsan yahay adduunka ah?
tayo sare leh iyo ujrooyinka hooseeyo
Xarunta Admission Yukreeniyaan u oggolaaneysa ardaydu inay bartaan jaamacadaha Ukraine oo aan imtixaan kasta
Xarunta Admission Yukreeniyaan u oggolaaneysa ardaydu inay bartaan jaamacadaha Ukraine oo aan wax gelitaanka
Haddii aad gelitaanka via Xarunta Admission Yukreeniyaan, ka dibna waxaad ka heli doontaa dammaanad visa waxbarasho Ukraine
aad diyaar u tahay Study in Ukraine?
Ku saabsan habka Admission
Xarunta Admission Yukreeniyaan waa urur rasmi ah taas oo ka caawisa ardayda ajinebiga ah si aad u dalbato iyo waxbarasho ee jaamacadda wax Yukreeniyaan. Waxaan kaa caawin ardayda ka tallaabo ugu horeysay (dooranaayo ee jaamacadda) si ay u socon (qalinjabinta).
Xarunta Admission Ukraine ayaa waxaa si gaar ah u aasaasay ardayda caalamiga ah si ay u sameeyaan Hawsha aqbalka iyo waxbarashada ee jaamacadaha Yukreeniyaan sida fudud, dareen iyo raaxo sida ugu macquulsan.
About Center Admission Yukreeniyaan
Waxaad dooran kartaa jaamacad kasta Yukreeniyaan. Haddii aad go'aan ka gaari kara, mar walba aan diyaar u ah inay kaa caawiyaan inaad doorato jaamacad ugu fiican si gaar ah kuu
Kharkov University of bangiyada
Ukraine cituated ee xarunta of Europe oo ay tahay dalka ugu weyn waxaa ku jira.
Ukraine mar walba way u furan yihiin, daacad ah oo ku faraxsan inay isgaadhsiin la yeeshaan dadka ajnabiga ah.
ee tayada sare ee waxbarashada
Jaamacadaha Ukrain waxay bixisaa tayada yurub ee waxbarashada in tirada weyn ee u gaarka ah.
Waxaad noqon doontaa in raaxada waqti kasta ee sannadka. Winter waa digo iyo xagaaga aad u kulul ma aha.
Waxbarashada Ukraine waa ka ugu jaban Yurub. Waxaa runtii waa kharash wax ku ool ah.
Haweenka Yukreeniyaan waa mid ka mid ah kuwa ugu quruxda badan dunida.
Waxaan had iyo jeer kuu sheegi ku saabsan oo dhan updates in eduacation Yukreeniyaan
Admission 2017-2018 furan yahay!
ardayda la filayo Gacaliye! Waxaan ku faraxsan nahay in aan idinla socodsiiyo, gelitaanka in jaamacadaha Ukraine, waayo, 2017-2018 furan yahay hadda. Waxaad codsan kartaa online hadda inay jartaan kursi ee jaamacadda. Jaamacadaha bilaabaan inay soo diri waraaqaha casuumaad tan iyo March. Dooro Center Admission Yukreeniyaan rasmiga ah iyo hesho gelitaanka damaanad jaamacadaha ugu wanaagsan ee Yukreeniyaan! tixgalin, Ukranian…
Admission 2016-2017 furan oo ku jira Ukraine
ardayda la filayo Gacaliye, habka Admission waayo, 2016-2017 sano u furan yahay hadda. Sannadkan waxaa jira wax badan oo wanaagsan surprices. Tani sano ee Ukraine xilka Admission.Center caalami ah oo rasmi ah u furay. Sidaas, sanadkan ardayda ka dalban kartaa wax directlty jaamacadda Yukreeniyaan via Xarunta Admission Yukreeniyaan. Waxa ay u ogolaataa ardayda si loo dedejiyo geedi socodka ogolaanshaha iyo damaanad qaaday a…